Mpanamboatra kaontenera sakafo | Orinasa sy mpamatsy fitoeran-tsakafo any Shina
Mpamatsy vidin'ny orinasa mpamatsy vidin'ny kitapo ...
Eco Compostable Rectangle Container
Hena azo ovaina Eco-lao sy lovia voankazo
Fako fitahirizana latabatra sakafo eo amin'ny Cornstarch
Kaontenera azo vonoina toy izany & voankazo
Skypurl's Cornstarch Suchi & Fruit Containers miaraka amin'ny sarony mifanaraka tanteraka amin'ny zavatra ilainao isan'andro amin'ny latabatra azo ovaina. Azo antoka ny fifandraisana amin'ny sakafo, ary mandalo ny fanamarinana ny AIB Vincotte Lab's OK Biobased (kintana 2 sy kintana 4), DIN CERTCO Compostable, USA Bio Preferred, ary koa mihaona amin'ny fenitra USA FDA 21 CFR171.170, EU EN71.
Ny kaontenera fihinan'ny katsaka any Skypurl miaraka amin'ny sarony dia manome kaontenera tena tsara ho an'ny sakafo alaina sy serivisy fanaterana. Vita avy amin'ny vatan-katsaka avy amin'ny katsaka voajinja, ireo kaontenera sakafo ireo dia tsy misy gluten, eco-friendly, microwave ary oven azo antoka. Izy ireo no mpisolo toerana lavorary an'ireo kaontenera plastika sy Styrofoam!
Cornstarch Multi-faritra 3/4/5 faritra fitoeran-tsakafo
Skypurl's cornstarch 3/4/5 ampahany fitoeran-tsakafo misy sarony dia manome kaontenera tena tsara ho an'ny varotra sakafo voaomana sy manatitra. Vita amin'ny akora azo zezika amin'ny kofehy voajanahary avy amin'ny katsaka voajinja na katsaka very. Ireto boaty ireto dia tsy misy poizina, tsy misy gluten, eco-friendly, ary tsy misy lamba firakotra. Izahay koa mitondra 100% compostable maka kitapo hitondra azy ireo.
Ice cream sy lovia vita amin'ny vovo-katsaka voajanahary
Skypurl's Cornstarch Bowls dia eco-friendly ary marobe ary azo ampiasaina ho lasopy na acai bowls na kaopy gilasy. Hita amin'ny habe isan-karazany izy ireo ary azo zahana ihany. Ary ny fitoeran-tsakafo fihinanam-boanjo dia tonga lafatra amin'ny lasopy mafana ary manome toerana ho an'ny gilasy gilasy sy fonosana, yaorta mangatsiaka na vilia acai. Manolotra fanontana manokana ihany koa izahay hanamboarana ny loviao miaraka amin'ny marikao.
Takelaka fisakafoanana tokana misy zaridaina zezika
Ny fanangonana an'i Skypurl amin'ny takelaka boribory Cornstarch dia vita amin'ny fibres maharitra, zana-katsaka. Izy ireo dia safidy eco-friendly tonga lafatra mba hisolo ny volo plastika na plastika azo ampiasaina tokana ho an'ny serivisy fisakafoanana hisakafoanana na hetsika rehetra.
Ny fantsom-pisakafoanana ataon'ny Sksturl's Cornstarch Trays dia fomba iray mety hanolorana sakafo sy sakafo any an-toerana. Misy efitrano maromaro misy habe sy safidy amin'ny sarony. Ny fitoeran-tsinay dia safidy mety amin'ny plastika na latabatra taratasy!
Kisary Hamburger Cornstarch Biornegradable 6 mirefy
Skypurl's 6 inch Disposable Cornstarch Hamburger Box dia mety amin'ny sakafo haingana any Andrefana, mety raha hihinana na esorina. Ny hoditray dia vita amin'ny vongan-katsaka, izay azo osaina avy amin'ny natiora. Miaraka amin'ny fampiasana fitaovana azo havaozina, ny boaty hamburger anay dia safidy mety amin'ny latabatra plastika!
Sakafo fisakafoanana an-tsokosoko voajanahary voajanahary
Skypurl's Cornstarch Clamshells dia miorina amin'ny zavamaniry, tsy misy gluten ary manome safidy mahasalama kokoa amin'ny foam sy plastika. Ny sakafonao mahasalama sy mahasalama dia ho tsara tarehy ao amin'ny eco-friendly, compostable, manaova kaontenera ary handeha boaty. Hankasitrahan'ny mpanjifa ny ezaka maharitra hataonao amin'ny alàlan'ny kojakoja fisakafoanana avo lenta. Miantsena ireo fitaovana sy vokatra maharitra maharitra eto amintsika amin'ny vidiny ambongadiny miaraka amin'ny fandefasana haingana!
Skypurl's Cornstarch Food Tray dia mety tsara amin'ny fampiasana fitehirizana sakafo isan'andro, azo ampiharina amin'ny fampiasana an-trano, fivarotana lehibe, fivarotana enta-mavesatra sns. toe-javatra indostrialy. Manome soloina tsara kokoa an'ireo latabatra plastika.